Yoweri Museveni “Waxaa jira waddamo badan oo aan laheyn dowlad maamusha, Soomaaliya ayaa ka mid ah” | allsanaag
Yoweri Museveni “Waxaa jira waddamo badan oo aan laheyn dowlad maamusha, Soomaaliya ayaa ka mid ah”
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inay jiraan dalal badan oo aan laheyn dowlad maamusha, isagoo tusaale u soo qaatay Soomaaliya.
Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay shir sanadeedka Hey’adda Garsoorka Soomaaliya, isagoo xusay in Soomaaliya aanay laheyn dowlad maamusha.
“Waxaa jira waddamo badan oo aan lahayn dowlad. Way jiraan, laakiin ma haystaan hay’ad abaabulan oo maamusha, Soomaaliya waa mid ka mid ah. Waxaa jira dalal kale laakiin ma sheegayo sababo diblomaasi awgeed”ayuu yiri Madaxweyne Museveni.
Uganda ayaa xilligan waxaa ka jooga Ciidamada ugu badan ee howlgalka AMISOM, sidoo kale waxay Ciidamada Uganda ka hayaan ilaalo xarumaha dowladda, sida Madaxtooyada, Dekeda Muqdisho iyo Garoonka Diyaaradaha.
← Cali Geedi oo xaflad sagootin ah loo sameeyey Dhibku waa Damaca Foosha Xun →